Immisa nooc oo ah habka loo rakibo hoteelka?
Waxaa jira 3 qaabab rakibid ah inta badan hoteelka.
Wall Lagu dhejiyay gidaarka gudihiisa
Shaashadda LED-ka ee lagu dhejiyay gidaarka gudihiisa waxaa loola jeedaa dhejiska marxaladda. Masraxa labadiisa dhinacba waxaa ku yaal guddiga KT, rinjiyeynta buufin ama daah maro ah shaar qurxin, taas oo dadka uun u oggolaanaysa inay sawir keliya arkaan. Nooca noocan ah ee loo yaqaan 'LED screen' waxaa badanaa lagu dhejiyaa hoteelada. Kaqeybgalayaasha iftiiminaya shaashadda LED-ka, macaamiisha way arki karaan tayada fiidiyowga kahor inta aysan jaale huteel dhigan, inta badan moodooyinka hudheelkuna waa P3 P4, xitaa P5.
Installation Rakibaadda nooca isku dhafan
Shaashadda ugu weyn ee loo yaqaan 'LED screen' oo lagu rakibay bartamaha xarunta, laba shaashadood oo yar yar oo lagu rakibay labada dhinacba, sameysana marxalad marxaladdeed leh naqshad isku dhafan. Fiidiyowga muuqaalku wuu fiican yahay, marka shaashaddu fiidiyowga ciyaaro. Markuu aroosku bilaabmay, shaashadda weyn ayaa loo isticmaalaa in lagu sii daayo arooska, labada shaashadood ee dhinacna waxay ku ciyaari karaan fiidiyoow qurux badan.
Shirkado badan ayaa badanaa adeegsada shaashadan Nooca ah ee loogu talagalay kulanka Sannadlaha ah.
Shaashad weyn oo hogaaminaysa shirka
Asalka marxaladda oo dhan waa shaashad ballaaran oo LED ah, dhammaan astaanta, sawirrada iyo sawirrada ayaa lagu soo bandhigaa shaashadan weyn ee LED-ka, martida ayaa arki kara 360 ° oo aan gees ka aheyn shaashadda LED-ka.
Shirkado badan ayaa u isticmaalay shirkii badeecada.